केही खानले स्वास गन्हाउँछ, पेट फुलेझै बनाउँछ अनि असहज गर्छ। खानाकै कारण कामको बिचमै बाथरुम दौडिन नपरोस्। आफुलाई असहज बनाउने खाना नखानु नै बेस। यहाँ से क्सको अघि खान बाट बच्नु पर्ने ४ खानाको बारेमा चर्चा गरिएको छ। तारेको खाना तारेको वा भुटेको खानले टेस्टेस्टोरनको लेभल र सर्कुलेसनमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ।.....
युवतीहरुलाई आफू नुहाउदै गर्दा पनि विभिन्न खालको चिन्ताले सताउने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । महिलाहरुले नुहाउदा आफ्नाे शरीर र कपालको बारेमा चिन्ता गर्छन् । यस बाहेक उनीहरु बाथरुमभित्र आफैसँग छिल्लिने गरेको समेत अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । केटीहरू अक्सर सम्बन्धबारे चिन्तित रहन्छन् । उनीहरू सधैं दिगो सम्बन्धको.....
‘नक्कली आइडी बनाएर आफ्नै श्रीमानलाई मायाको जालमा फसाउँदैछु’
एक विवाहित महिला जसको मुहारमा उदासी स्पष्ट देखिन्थ्यो । उनी साईबर क्याफे आउँछिन् । अनि क्याफे सञ्चालक युवा दम्पत्ती कहाँ गएर आफूलाई फेसबुक आइडी चाहिएको ईच्छा ब्यक्त गर्छिन् । सो क्याफे मालिकले फेसबुक अकाउन्ट खोल्न शुरु गर्छन् । अनि ती युवतीसँग उनको नाम सोध्छन्, जो फेसबुक प्रोफाईलको लागि चाहिएको हुन्छ.....
काठमाडौंमा ट्याक्सी भित्रै युवायुवतीको मस्ती, ट्याक्सी हल्लिरह्यो त्यसपछि… (भिडियो)
ट्याक्सी चालक अमृत सापकोटालाई २ जनाले दरबारमार्गमा हात दिए। उनले ट्याक्सी रोके। जोडी नै ट्याक्सी चढे र चक्रपथ लैजान भने। उनले बा१झ ३५० नम्बरको ट्याक्सी चक्रपथतिर हु’इँक्याए। युवा–युवती पछाडि छि’ल्लीरहेका थिए। उनले त्यत्ति वास्ता गरेनन्। आफ्नै सुरले चलाइरहे। चुनदेवीतिर पुगेपछि पछाडिको आवाज बदलियो।.....
कुनैपनि महिला पुरुष एक अर्काप्रति आकर्षीत हुनु सामान्य मानिन्छ । कुनै पनि पुरुषहरुले पहिलो पटक महिलालाई भेट्दा के कुरामा ध्यान दिन्छन् भन्ने हामीले चर्चा गरेका छौं । पहिलोः पुरुषहरुले युवतीको ओठमा ध्यान दिने गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । कारण यदि युवती हाँसीरहेकी छ भने युवकले आफूसँग युवती बोल्न.....
प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेर पनि मानिसले सजिलै परिवर्तन गर्न सक्दैन । विशेष गरेर महिलाहरूका अंग पुरुषका भन्दा आकर्षक हुन्छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने एक न्यूज पोर्टलका अनुसार महिलाको छाती, कम्मर र उसको पछाडिको भाग (कम्मरभन्दा मुनि) लाई धेरैले नजर लगाउने.....
पुरुषले पहिलो पटक महिलालाई हेर्दा कस्तो कुरामा विशेष ध्यान दिन्छन् त ? यो कुरा धेरै महिलाहरुको लागि चासोको विषय बनेको हुन सक्छ । जब कुनैपनि युवकको अपरिचित युवतीसँग आँखा जुध्छ । युवकले त्यसपछि नजरले भ्याउन्जेल एकसरो युवतीको सिरदेखि पुच्छार सम्म हेर्छ । पहिलो नजरमा जिउका सबै भागमा आँखा पुराउन सक्ने कुरा.....
महिलाले भित्री वस्त्र खोलेर सुत्नुका अचम्मका ७ फाइदा
महिलाहरू निर्वस्त्र सुतेमा फाइदा हुने अध्ययनले देखाएको छ । दिनमा ब्रा र पे’न्टी अनिवार्य लगाउने र राति खोल्ने बानी बसाल्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने अध्ययनको निष्कर्स छ । अध्ययनका अनुसार भित्री व’स्त्र खोलेर सुत्नुका केही फाइदा आराम हुन्छ- ब्रा र पे’न्टी लगाएर सुत्दा रक्त-सञ्चार र श्वासप्रश्वा’समा.....
धेरैलाईं थाहा हुदैन ? विवाहपछि युवतीमा आउँछ यस्ता ७ परिवर्तन
विवाहपछि युवतीले आफ्नो घर छोडेर नयाँ घरमा बस्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ घरको चाल चलनलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ । महिलाले विवाहसँग घर मात्रै परिवर्तन गरेका हुँदैनन् सम्बन्ध पनि परिवर्तन भएका हुन्छन् । छोरीबाट बुहारी बनेका हुन्छन् । नयाँ परिवेशमा नयाँ चुनौतीको सामना गर्न परिरहेको हुन्छ । छोरी या युवतीबाट बुहारी.....